Maraykanka oo cunaqabatayn saaray saraakiil taageerta Al Shabab. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Maraykanka oo cunaqabatayn saaray saraakiil taageerta Al Shabab. Dowladda Maraykanka ayaa cunaqatayn kusoo rogtay lix sarkaal oo africaan ah kuwaasoo u dhashay dalalka Eritrea ,Sudan iyo Kenya. Kuwaas oo ay ku eedeysay in taageero ay siiyeen dhaqdhaqaaqa al Shabab.
War ka soo baxay wasaaaradda maalyadda dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay xanibtay labo sarkaal oo eriteriyaan ah , hal sarkaal oo suudaanees ah iyo saddex sarkaal oo u dhashay dalka Kenya kuwaas oo maraykanku uu u diiday in lala macaamiltamo iyagana ay cid la macaamiltamaan islamarkaana laga mamnuucay isticmaalka lacagahoodii, waxana lagu soo rogay xannibaad dhinaca safarada ah.
Agaasimaha xafiiska qaabilsan koontaroolka lacagaha dibadda ee wasaaradda maalyadda dalka maraykanka Adam Szubin, ayaa sheegay in saraakiishan lagu helay dambi ah in xiriir dhow ay lalahaayeen xarakada al Shabab oo ay u direen lacago si al shababku ay ula jibbaaraan dagaalada ka dhanka ah AMISOM iyo dowladda KMG .
Labada sarkaal oo u dhalatay dalka Eretria ayuu Adam Szubin sheegay in marar badan ay la kulmeen saraakiil al Shabab u qaabilsan dhanka dibadda .oo ay kala hadleen hurinta dagaalada al Shabab ay ka wadaan dalka somalia waa sida uu hadalka u yiri.
Goaankan dowladda maraykanka ay qaadatay ayaa ku soo aadaya xilli maalin ka hor 15ka ee Golaha amaanka ee QM ay ku baaqeen in cunaqabatayn lagu soo rogo kooxaha iyo shaqsiyaadka xiriirka la leh al Qaacidda. Xaafiiska Wararka Warlalis.com